Shiinaha miyaaa duqeeyay Saldhigga Mareykanka mise waa muuqaal been ah? | Somalia News
Shiinaha miyaaa duqeeyay Saldhigga Mareykanka mise waa muuqaal been ah?
Xigashada Sawirka, PLA Airforce Online
Sida wararka lagu sheegay, muuqaal dacaayad ah oo ay sameeyeen militariga Shiinaha oo laga jilay weerar duqeyn ah, waxaa loo adeegsaday muuqaallo kooban oo laga keenay aflaan Hollywood ah oo ay ka mid yihiin Transformers iyo The Rock.
Muuqaalka waxaa laga arkay diyaaradah qaada nukliyeerka oo weerrarro isku xigxiga ku qaadaya wax u muuqday saldhigga militariga Mareykanka ee Jasiiradda gacanka Guam.
Muuqaalkaas waxaa daawatay in ka badan shan milyan oo qof oo isticmaala bogga bulshada Shiinaha ee Sina Weibo.
Balse dad badan oo adeegsada bartaas ayaa ku jeesjeesay Shiinaha waxayna sheegeen in uu adeegsaday muuqaallada aflaanta Hollywood-ka.
“Waa nasiib darro in Shiinaha uusan dhowreynin xuquuqda lahaanshaha muuqaalka,” ayuu yiri qof ku kaftamayay arrintaas.
“Ma waxaa laga soo xaday filim Mareykan ah?… Aniga uun… haha” ayuu qoray qof kale oo aragtidiisa ka dhiibtay.
Mid seddaxaad ayaa yiri: “Ha adeegsanina muuqaallada kooban ee dalalkaas qaabka daran. Dadka Twitter-ka ayaa inagu jeesjeesaya waxaanna darmeemayaa xanaaq.”
Muuqaalka oo labada daqiiqo ah, loona bixiyay ‘Weerarka Gods of War’! – waxaa baahiyay ciidamada Cirka ee Shiinaha, Sabtidii.
Waxaa la dul saaray muusiko aad cajiib iyo argagax u leh, waxaana ka muuqday Madaafiicda H-6 oo lagu weeraray wax loo ekeysiiyay Saldhigga Ciidamada Cirka Mareykanka ee Andersen.
“Waxaan nahay difaacayaasha amniga hawada ee dalka hooyo; waxaan leenahay awood iyo kalsooni aan markasta ku difaacno hawada dalka hooyo,” Sidaas ayey ciidanka Shiinaha ku dul qoreen muuqaalka.
Balse dadka adeegsada baraha bulshada waxay isla markiiba garteen in muuqaalka laga soo jarjaray wax u ekaa filimkii Transformers: Revenge of the Fallen, The Rock iyo Hurt Locker.
Militariga Shiinaha weli si rasmi ah ugama aysan hadlin dhalleeceynta loo jeediyay.
Ilo xog ogaal ah oo ka tirsan militariga oo la hadlay wargeyska South China Morning Post, waxay sheegeen in wax iska caadi ah ay tahay in qeybta xayeysiinta ciidamada ay muuqaallo “ka soo amaahadaan” aflaanta Hollywood.
“Inta badan dhamaan askarta waxay ku barbaareen iyagoo daawanaya aflaanta Hollywood, marka maskaxdooda waxaa xiriir dhow la leh filimada dagaalka ee Mareykanka,” waxaa sidaas laga soo xigtay qofka hadlay.
Muuqaalka waxaa lagu soo aadiyay xilli ay Ciidamada Shiinaha sameynayeen dhoolatus Militari oo ka dhacay meel u dhow Taiwan. Sidoo kale waxaa sare u sii kacaya xiisadda u dhexeysa Shiinaha iyo Mareykanka iyadoo sarkaal sare oo ka tirsan Waaxda Arrimaha dibadda ee Mareykanka uu booqanayo Jasiiradda Taiwan.
Shiinaha wuxuu Taiwan u arkaa gobol dalkiisa ka tirsan, balse Jasiiradda waxay isu aragtaa dowladda Madaxbannaan.
Collin Koh, oo ah cilmi-baare ka tirsan Machadka Difaaca iyo Istiraatiijiyadda ee Singapore, wuxuu Wakaaladda Wararka ee Reuters u sheegay in “muuqaalka uu yahay digniin ku socota Mareykanka kaas oo ah in xitaa haddii dagaal uu bilowdo in Guam ay halis ku jirto, iyo marka uu dhammaado in Taiwan iyo Badda Koonfurta Shiinaha ay qad cas noqon doonaan.”
This post first appeared on BBC Somali - Somali. Read the http://www.bbc.com/somali/war-54246494original article
Previous articleHeshiiska doorashada oo wadajir loo horgeyn doono Labada Aqal ee Baarlamaanka
Next articleDortmund, Favre: “Against PSG we should have scored a third goal at the end of the match”